Madaxweynaha Barcelona oo ugu dambeyntii ka hadlay wararka xanta ah ee lala xiriirinayo Antoine Griezmann – Gool FM
(Spain) 16 Abriil 2019. Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa soo afjaray wararka xanta ah ay saxaafada gudaha Spain ay wareejinayeen isbuucyadii lasoo dhaafay, kaasoo ku aadanaa in Blaugrana ay xiiseeneyso saxiixa Antoine Griezmann.
Xidiga ree France ayaa lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo Barcelona kahor Koobka Aduunka ee 2018-ka ee ka dhacay dalka Russia, balse wuxuu ugu dambeyntii go’aansaday inuu sii joogo kooxdiisa Atletico Madrid.
Laakiin warar dhawaanahan ay saxaafada gudaha dalka Spain shaacisay ayaa lagu sheegay in Griezmann uu doonayo u dhaqaaqista garoonka Cump Nou, tan iyo markii ay kooxda Atletico Madrid isaga soo hartay tartanka xiisaha badan ee Champions League.
Laakiin madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa wareysi uu bixiyay kahor kulanka Champions League ay caawa kula ciyaari doonaan Manchester United garoonka Cump Nou, waxaa la weydiiyay su’aal ku aadan wararka xanta ah ee Blaugrana lala xiriirinayo saxiixa Griezmann.
“Waxaan la qabsaday xili kasta in wax walba aan uga hadlo sida saxda ah”.
“Ma aanan la hadlin Antoine Griezmann, ama qof kasta ee isaga u dhow, sababtoo ah kiiska la xiriira Griezmann ma ahan mid xiligan miiska inoo saaran”.
Dhanka kale, madaxweynaha Barcelona ayaa beeniyay wararka ku saabsan inay iibinayaan daafaca reer France ee Samuel Umtiti, inta lagu gudi jiro suuqa xagaaga ee soo aadan wuxuuna yiri:
“Samuel Umtiti waa ciyaaryahan cajiib ah, balse waxa kaliya uu u baahan yahay ayaa ah inuu sii ciyaaro kadib dhaawicii uu dhawaan kasoo kabtay”.
“Waa kulan cajiib ah!” – Zidane oo ka hadlay dareenkiisa kadib barbarihii ay xalay la galeen kooxda Leganes